जादुई जादुईकरण को एक भूमि मा जाएँ, जहां राज्य राजाहरु र क्वींस, जोकरहरु को लागि घर हो र ... एक ओग्रे ?!
In Betsoftसबै भन्दा नयाँ स्न्याट हिट OGRE EMPIREएक फंतासी राज्य को नगरपालिकाहरु संग एक असुविधाजनक ओग्रे समस्या संग जुडें! एक अभिनव दिन / रातो चक्र गेमप्ले स्विच गर्दछ र खेलाडिहरूलाई शहरमा बाँच्ने मानिसहरूका लागि कस्तो जीवन अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ।
दिनभरि, ओग्रे जागिर र सक्रिय हुँदा शहरीहरू सुतिरहेका छन्। र यो कुनै आश्चर्य छ, जस्तै Ogre ले पत्थर कहिलेकाहीँ पत्थर प्रतीकहरू लुकाउँनेछ, थप पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने! एक रात राती हुन्छ, ओग्रे सुत्न पुग्छ र शहरीहरू आफ्नो ढुङ्गाको घरबाट उगाए। राती मोडको समयमा केवल रिल्समा देखा पर्दा तिनीहरू उनीहरूको साथमा शाही पुरस्कारहरू ल्याउँछन्! उच्च भुक्तानी रात मोडको मात्र फाइदा होइन: जोकर पनि उभिएको छ र उनको साथ merriment र 2x विल जीतन्छ!
जोकर निश्चित रूप देखि यो राज्य मा एकमात्र जंगली खोज छैन! दुवै दिन र रात एक विशेष WILD फूल ब्लासोम प्रदान गर्दछ। जादू बढ्छ र विस्तार गर्नुहोस्, प्रत्येक फूल ब्लोसोको रूपमा र बढ्छ वा स्प्रेहरू घुमाउँदछ, रिले WILD मा अन्य प्रतीकहरू बदल्छन्!
OGRE EMPIRE मा संघर्ष रिल छ र पुरस्कारहरु पौराणिक कथाहरु भन्दा कम छैनन्!
फ्रान्की डेटोरिस जादू सात खजाना
त्रि कार्ड पोकर
ज्याक वा राम्रो 10 हात
Ogre साम्राज्य अपडेट गरिएको: जनवरी 15, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 Ogre साम्राज्य
2.0.0.1 टोकी समय
2.0.0.3 सुँगुर भाग्यशाली
2.0.0.4 किक गधा
2.0.0.5 फ्रान्की डेटोरिस जादू सात खजाना
2.0.0.6 त्रि कार्ड पोकर
2.0.0.7 ज्याक वा राम्रो 10 हात